Ibhajethi Yesikhwama
Inguqulo yebhajethi yesibhengezo sikabhaka ingumthelela ophezulu kodwa ithuluzi lokumaketha elibizayo lokuphromotha esixukwini.Enziwe ngezinto ezingasindi, kodwa ezihlala isikhathi eside, lezi zibhengezo ezigqokekayo kulula ukuzithwala.Ngesikhangisi sefulegi esiphrintiwe ngemuva, ungakhulula izandla zakho bese uthumela izincwajana, amapheshana noma izipho.
Inhlanganisela eguquguqukayo yomumo wamafulegi amahlanu esigxotsheni esisodwa sefulegi - ifulegi lophaphe, ifulegi le-teardrop, ifulegi le-recatangel, ifulegi le-arch, ifulegi lokugwedla
Ifulegi lokuhamba ngojosaka lingasetshenziselwa ukuheha ithrafikhi edlulayo noma ukugqamisa ibhizinisi lakho noma inhlangano emicimbini, umbukiso wezohwebo njengama- fete nezimakethe noma ezinye izindawo ezimatasa.
Inguqulo yethu yebhajethi yesibhengezo se-Banner ingumthelela ophezulu kodwa ithuluzi lokuthengisa elibizayo lokuphromotha esixukwini.Enziwe ngezinto ezingasindi, kodwa ezihlala isikhathi eside, lezi zibhengezo ezigqokekayo kulula ukuzithwala.Ngesikhangisi sefulegi esiphrintiwe ngemuva, ungakhulula izandla zakho bese uthumela izincwajana, amapheshana noma izipho.
(1)Ingasindi futhi iyaphatheka, indlela enhle neyingqayizivele yokukhangisa ngeselula
(2)Ubhakha owodwa onesudi yesigxobo efanayo yamafulege ama-5, izindleko zokonga nendawo yesitoko.
(3)Amaphaneli angemuva abunjiwe e-3D-foam asebenza njenge-cushion futhi avumela ukugeleza komoya phakathi kwamapaneli angemuva nangemuva, anganikeza umuzwa okhululekile
(4)Iphakethe elikhethekile lezigxobo kanye namaphakethe anezikhala/amahhuku wezincwajana, ibhodlela lamanzi njll.
(5)Ibhande elinwetshiwe eligcwele isipontshi ukuze usebenzise kangcono ulwazi
(6)Amabhakede ebhande avimbela ubhaka ukuthi unganciki uma kunomoya onamandla.
(7) Izinto ze-Oxford zenza ubhaka uqine kakhulu uma usetshenziswa isikhathi eside.
(8)isigxobo esiyinhlanganisela yekhabhoni.
I-BBDSHF S(uphaphe) 122x51cm 0.8KG 50*38*5.5CM
Okwedlule: Ibhodi le-backapck
Olandelayo: I-HDPE ye-backpack